आज यस्ता छन् तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम — Imandarmedia.com
आज यस्ता छन् तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम
आज चैत्र २१ , २०७८ या अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार अप्रिल ४, २०२२। तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने आज संसारभर भएका प्रमुख घटनाहरू यसप्रकार रहेका छन् :इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पाकिस्तानी संसदद्वारा खारेज।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिएको छ । संसद्का उपसभामुख कसिम खान सुरीले संविधानको धारा ५ का आधारमा प्रधानमन्त्री खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिएको बताएका हुन् ।
सभामुख असद कुशैरविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएका कारण उपसभामुखले तल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गरेका हुन् ।पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ मा हरेक नागरिक राज्यप्रति वफादार रहनुपर्ने तथा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहेको पाकिस्तानी नागरिक वा पाकिस्तानमा रहने जो कोहीले पनि पाकिस्तानी संविधान एवम् कानून मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री खानले आफूलाई विदेशी शक्तिले हटाउन चाहेको दाबी गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यही दाबीका आधारमा धारा ५ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिएको सूचना मन्त्री फवाद चौधरीलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्ताबाट प्रकाशित हुने डन अखबारको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ ।
उनले कुनै पनि विदेशी शक्तिलाई पाकिस्तानी सरकार भंग गर्न नदिइने समेत बताएका छन् ।संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने बेला विपक्षीसँग १७४ मत रहेको डनले जनाएको छ । त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न केबल १७२ सिट पर्याप्त हुन्छ ।
यता विपक्षी दल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी पीपीपीका नेता विलावल भुट्टो जर्दारीले भने अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदन हुन नदिएर सरकारले नै संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यसैबीच पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद् विघटनगरेका छन् । पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने डन अखबारको अनलाइन संस्करणले जनाएअनुसार प्रधामन्त्री खानले राष्ट्रपति आरिफ अल्भीसमक्ष संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति अल्भीले सदर गरेसँगै पाकिस्तानको संसद् विघटन भएको छ । संसद् विघटनसँगै उनले आगामी ९० दिन भित्र निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री खानले संसद्मा आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेको केही बेरमै संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।विपक्षी दलहरूले काम गर्न नदिएकाले अहिलेको संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान लागिएको उनले बताए । पाकिस्तानमा लामो समयदेखि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री खान र उनी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
नवाज शरिफमाथि आक्रमण” पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई लक्षित गरी हमला भएको छ । बेलायतको राजधानी लण्डनमा बसोबास गर्दै आएका शरिफलाई सत्तारुढ पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पार्टीका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको बेलायतमा रहेका पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।
आक्रमणका क्रममा शरिफका सुरक्षाकर्मी घाइते भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि शरिफमाथि हमला भएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइ खान पदबाट हटेको खण्डमा नवाजका भाइ एवम् पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) का नेता शहबाज शरिफलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने बताइएको छ ।
यता नवाज शरिफकी छोरी मर्यमले भने हिंसात्मक गतिविधि गर्ने सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई तत्काल कारवाही गर्न माग गरेकी छिन् । यतिमात्रै नभइ इमरान खान आफैँ घटनाप्रति जिम्मेवार रहेको उनले आरोप लगाएकी छिन् ।
श्रीलंकामा कफ्र्यू: श्रीलंकामा ३६ घण्टाका लागि देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण अस्थिरता र अशान्ति बढिरहेका बेला सरकारले कर्फ्यू घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपतिलाई दिइएको अधिकारअन्तर्गत स्थानीय समयअनुसार शनिबार साँझ ६ बजेदेखि सोमबार बिहान ६ बजेसम्का लागि देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको सरकारको सूचना विभागले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यसैबीचश्रीलंकामा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चर्को मूल्य वृद्धि एवम् औषधि, पेट्रोल, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभावका कारण हाल श्रीलंकामा व्यापक प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
प्रदर्शनमाझ प्रदर्शनकारीको क्रुद्ध भीडले श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको घर समेत घेराउ गरेका थिए । त्यसयताश्रीलंकामा संकटकाल लगाइएको छ ।
यही क्रममा त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । ‘रक्षा मन्त्रालयको विशेष निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालहरुमाथि छोटो समयका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । शान्ति कायम गर्नका लागि मुलुकको हितका लागि यस्तो गरिएको हो ।’ श्रीलंकाको दूरसञ्चार नियमन आयोगका प्रमुख जयन्थ डिसिल्भालाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ ।
विश्वभर इन्टरनेटको निगरानी गर्ने समूह नेटब्लक्सले श्रीलंकामा ट्विटर, फेसबुक, ह्वाट्सएप युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल लगभग ठप्प रहेको जनाएको छ ।
यता मुलुकका युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवम् राष्ट्रपति राजापाक्षेका भतिज नमल राजापाक्षेले भने ट्विट गर्दै ‘सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको पक्षमा नरहेको’ टिप्पणी गरेका छन् । ‘मैले प्रयोग गरेजस्तै भीपीएनको पहुँचले यस्तो प्रतिबन्ध व्यर्थ बनाउँछ । म अधिकारीहरुसँग यसबारे प्रगतीशील सोचाइ राख्न र निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छु ।’ उनले लेखेका छन् ।
रुसी सेनाले युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाइ
युक्रेनमाथिको हमलाको आकार घटाएको बताएको रुसी सेनाले पूर्वी युक्रेन र दक्षिणी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन् ।
शनिबार राति एउटा भिडियो सम्बोधनमा उनले भने, ‘रुसी सेनाको लक्ष्य के हो ? उनीहरुले पूर्वमा डोनबास र दक्षिणी युक्रेनलाई नियन्त्रणमा लिन चाहन्छन् ।’ आफूहरुको उद्देश्य देशको रक्षा गर्नु भएको उनले बताए । ‘हाम्रो लक्ष्य के हो त ? हामी आफैलाई, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो भूभाग र हाम्रा नागरिकहरुको रक्षा गर्नु हो ।’, उनले भने ।
रुसी सेनाले घेरा हालेको दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारिओपोललाई रक्षा गर्न सफल भएकोमा उनले युक्रेनी फौजको प्रशंसा गरे । मारिओपोल र अन्य युक्रेनी शहरहरूमा युक्रेनी प्रतिरोधले किभलाई ‘अमूल्य समय’ प्राप्त गर्न अनुमति दिएको र रुसी सैन्य क्षमतालाई कमजोर बनाउन मद्दत गरेको उनको भनाई थियो ।
यसै साताको सुरुमा रुसले राजधानी किभ र उत्तरी सहर चेर्निभ वरपर सैन्य कारबाही ठूलो आकारमा घटाउने र यसको सट्टा पूर्वी युक्रेनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको थियो ।
रुसविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन जर्मनीको माग: रुसले युक्रेनको बुचा शहरमा युद्ध अपराध गरेको भन्दै रुसविरुद्ध युरोपेली युनियन ईयूले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेको छ ।जर्मन उपचान्सलर एवम् अर्थमन्त्री रोबर्ट हबेकले रुसले उक्त शहरमा ‘संगीन युद्ध अपराध’ गरेको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
जर्मनीको बिल्ड अखबारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘यस्तो संगीन युद्धअपराधको जवाफ नखोजि बस्न सकिन्न ।’उनले रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्धबारे पनि ईयूका सदस्यहरुसँग कुराकानी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मेरो विचारमा अझ सशक्त प्रतिबन्धहरु चाहिएको छ । ईयूका हाम्रा साझेदारहरुसँग हामी यसको तयारीमा छौँ ।
बुचाबाट रुसी सेना फर्किएपश्चात सामूहिक चिहानमा ३०० युक्रेनीको शव भेटिएपछि रुसले त्यहाँ गरेको भनिएको युद्ध अपराधबारे अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना भइरहेका बेला जर्मन उपचान्सलरको यस्तो भनाइ आएको हो ।
यसैबीच युद्धका क्रममा युक्रेनका नागरिकमाथि भएको आक्रमणलाई युद्ध अपराधका रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेलायती विदेशमन्त्री लिज ट्रसले बताएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले यससम्बन्धी लिएको कुनै पनि फैसलालाई बेलायतले समर्थन गर्ने पनि ट्रसले बताइन् । ‘रुसी सेनालाई पछाडि हट्न दबाब सृजना भएसँगै हामीले सेनाद्वारा इरपिन र बुचा जस्ता सहरमा दर्दनाक घटना भएको खबर पाएका छौँ ।’ ट्रसले भनिन् ।
अनुचित र आपराधिक हमलाअन्तर्गत रुसी सेनाबाट निर्दाेष नागरिकमाथि भएको आक्रमणलाई युद्ध अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्नेसमेत ट्रसले बताइन् । माइकोलाइभमा रुसी सेनाको रकेट आक्रमण:
युक्रेनको माइकोलाइभ शहरमा रुसी सेनाले रकेट आक्रमण गरेको छ । युक्रेनी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले केही रुसी रकेटले माइकोलाइभ क्षेत्रमा हमला गरेको जनाएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राममार्फत् मन्त्रालयका सल्लाहकार एन्टोन गेरेश्चेन्कोले जानकारी दिँदै रुसी रकेट आक्रमणका कारण माइकोलाइभ बन्दरगाह प्रभावित भएको बताए ।
हाल रुसले कृष्ण सागरको तटमा रहेका युक्रेनी बन्दरगाहहरु ओदेसा, माइकोलाइभजस्ता शहरमा अत्यधिक हमला गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
बेलायतबाट फ्रान्सका लागि उडेको विमान बेपत्ता: बेलायतबाट फ्रान्सका लागि उडेको सानो विमान बेपत्ता भएको छ । बेलायतको वारविकशायरस्थित वेल्सबर्नबाट फ्रान्सको ला तोकेका लागि उडेको विमान इङ्गलिस च्यानलको आकाशमा बेपत्ता भएको हो ।
पीए–२८ विमानमा दुई जना सवार रहेको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त विमान ‘चिन्ताजनक रुपमा बेपत्ता’ भएको फ्रान्सेली तटरक्षकको भनाइ छ ।
बेपत्ता विमानको खोजी कार्य जारी रहेको फ्रान्सेली तटरक्षक बलले जनाएको छ । खोजीकार्यका लागि फ्रान्सका दुई विमान र पानीजहाज परिचालन गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
बेलायती उद्धारकर्ताहरू पनि बेपत्ता विमानको खोजीमा लागेको बताइएको छ ।च्यानल जलक्षेत्रमा यात्रा गर्ने पानीजहाजलाई पनि बेपत्ता विमानको भग्नावशेष फेला पारेको अवस्थामा जानकारी दिन निर्देशन दिइएको छ ।
बाढी पहिरोका कारण ब्राजिलमा १४ जनाको मृत्यु: अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोमा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो राज्यमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ। दुई दिनयता जारी वर्षाका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपमा अरु ५ जना बेपत्ता भएका छन्।
प्रकोपमा मारिनेमा आठ बालबालिका समेत रहेको जनाइएको छ। अरु चार जना घाइते भएका छन्। भारी वर्षाले दक्षिणपूर्वी राज्यको एट्लान्टिक तटको ठूलो भाग प्रभावित भएको छ।
आगामी दिनमा अझै धेरै वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ ।बाढीबाट मृत्यु हुनेहरूमा एक महिला र उनका ६ वर्षका सन्तान पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।बाढीले उनीहरूको घर बगाएको थियो।
उद्धार कार्यमा सघाउन संघीय सरकारले सैन्य विमान पठाएको राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले बताएका छन्। ६ साताअघि पेट्रोपोलिस सहरमा अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोमा २३३ जनाको मृत्यु भएको थियो।